Ithegi: Imikhankaso | Martech Zone
Kunyaka ophelileyo, besisebenza nefemu yesizwe kwinkampani yokuthengisa kunye nokuThengiswa kwamafu kunye nokuphunyezwa. Kwasekuqaleni kokufumanisa kwethu, sichaze imiba ephambili ngokubhekisele kukhetho lwabo-olwalusekwe kakhulu kwimisebenzi. Xa inkampani iyile iphulo, bayakwenza uluhlu lwabamkeli ngaphandle kweqonga labo lokuthengisa nge-imeyile, balayishe uluhlu njengoluhlu olutsha, bayile i-imeyile, kwaye bayithumele kolo luhlu.
Indlela i-imeyile edibanisa ngayo ukuThengisa amaTshaneli amaninzi
NgoLwesibini, Januwari 8, 2013 NgoLwesibini, Januwari 8, 2013 UJenn Lisak Golding
Kule mihla nakwiminyaka, ukuthengisa kunamacala amaninzi. Ukusuka kwiiblogi ukuya kumajelo asekuhlaleni ukuya kwi-infographics ukuya kwi-imeyile, kubalulekile ukuba yonke imiyalezo yethu ihambelane kwaye idityaniswe. Sifumene kule minyaka i-imeyile isisiseko sentengiso yamajelo amaninzi. Sisebenze nabahlobo bethu eDelivra ukwenza le infographic malunga nokuba i-imeyile ibanceda njani abathengisi ukudibanisa kunye nokuxhasa umyalezo wabo wentengiso. Ngaba uyazi ukuba i-75% yabasebenzisi beendaba zosasazo bayayithathela ingqalelo
NgoLwesine, Julayi 12, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UJenn Lisak Golding
Ixesha elingaphezulu, abathengisi baphuhlise iindlela ezizodwa kunye neendlela ezintsha zokwenza izikhokelo. Kodwa iintengiso ezikwi-Intanethi zigcina indawo ephambili kwindawo yentengiso. Isifundo sika-Appssavvy, "Isalathiso semisebenzi yoLuntu-Ukulinganisa ukusebenza ngokukuko kweNtengiso yezeNtlalontle" esenziwa ngo-Epreli ka-2011, sityhila ukuba intengiso edityanisiweyo kwimisebenzi yentlalo ethe yasasazeka kwimidlalo yezentlalo, usetyenziso, nakwiiwebhusayithi zinamaxesha alishumi elinanye asebenza ngakumbi kunophando oluhlawulelwayo, kwaye kabini njengempumelelo njengemithombo yeendaba esisityebi. Iintengiso zentengiso ze-Intanethi, kwi
Iingcebiso ezi-3 zokwenza i-imeyile ekuLungele ukuSebenziseka
NgoMvulo, Februwari 20, 2012 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 15, 2012 Itempile yaseLavon
Phambi kokuba uqalise ukumisela ukuba ungayenza njani i-imeyile efanelekileyo, kufuneka uzibuze "Basebenzisa ntoni abamkeli bakho ukujonga i-imeyile yakho?" ukuba ufumanisa ukuba kukho isidingo se-imeyile elungiselelwe iselfowuni, lixesha lokuba uqalise ngokujonga ukuba uyenza njani. Nazi ezinye iingcebiso zokwenza ii-imeyile ezilungele ukuhambisa ii-imeyile kwimikhankaso yakho ye-imeyile. Imigca yezihloko. Izixhobo zefowuni zihlala zithatha imigca yesifundo se-imeyile